प्रदीप र अनमोलको भिड्ने सम्भावना कति ?
मुख्य पृष्ठकला मनोरञ्जन फिल्मीप्रदीप र अनमोलको भिड्ने सम्भावना कति ?
मङ्गलबार, ३१ असार, २०७६ 0प्रतिक्रिया
आफ्नै होम प्रोडक्सनको ब्यानरमा फिल्म निर्माण गर्न लागेका अभिनेता तथा निर्माता भुवन केसीको नयाँ फिल्ममा उनकै छोरा अभिनेता अनमोल केसीको प्रमुख भूमिका रहने पक्का भएको छ । केही समयदेखि फिल्मको स्क्रिप्टमा धमाधम काम चलिरहेको छ । दशैंपछि छायांकन सुरु हुने यस फिल्मलाई भुवन आफैंले निर्देशन गर्ने भएका छन् ।
उनले आफु पनि चाँडै आफू एक फिल्ममा भिलेनको भूमिकामा देखिन लागेको कारणले गर्दा अहिले दाह्री पालिरहेको बताएका छन् । धेरैले दाह्री किन पालेको भनेर सोधिरहेका कारण सोधेपछि आफु चाँडै अनमोल केसीसँग नयाँ फिल्ममा भिलेनको भूमिका निर्वाह गर्न अटेको कुरालाई सार्वजनिक गरेका छन् ।
आफ्नै होम प्रोडक्सनको ब्यानर दि सुपर काजोल फिल्मस्बाट बन्न लागेको नयाँ चलचित्रका लागि वितरण कम्पनीको रुपमा एफडी कम्पनीविच संझौता भएको छ भने अब फिल्मलाई एफडी कम्पनीले वितरण गर्ने फाइनल भएको छ । एफडी कम्पनीले भूवनलाई ग्यारेन्टी सहित ८० लाख भन्दा बढी एडभान्स दिइसकेको छ ।
नाम नै नसोचिएको यस चलचित्रलाई नयाँ वर्षको छेको पारेर चैत्र २८ गतेका दिनमा रिलिज गर्ने भूवन केसीले सोच बनाएका छन् । एफडीले भने उनको अन्तिम निर्णयको पर्खाईमा रहेको छ । यदि, भूवनले यही मितिमै फिल्म प्रदर्शन गर्ने फाइनल गरेमा अनमोल र प्रदिप जस्ता दुई स्टार कलाकारको भिडन्त हुने पक्का भएको छ ।
अभिनेता प्रदिप खड्काको मुख्य भूमिका भएको चलचित्र ‘प्रेमगीत ३’ले चैत्र २८ गतेलाई प्रदर्शन मिति पक्का गरिए पनि अहिलेसम्म चैत्र २८ मै आउने फाइनल निर्णय भने गरेको छैन । वितरण कम्पनीले पनि यी दुबै चलचित्रलाई एकसाथ प्रदर्शनमा ल्याउने मनस्थितीमा भने पक्कै छैन । सबै अभिनेता भुवन केसीको निर्णयको पर्खाईमा रहेका छन् ।